Global Voices Advocacy no nandresy tamin’ny fifaninanana bilaogy Zemanta · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Advocacy no nandresy tamin'ny fifaninanana bilaogy Zemanta
Voadika ny 04 Febroary 2019 7:34 GMT
Global Voices Advocacy no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana Blogging for a Cause an'ny Zemanta. Tranonkala isan-karazany maherin'ny 60 no voatendry, ary samy nahazo 1200 dolara ny dimy voalohany nahazo vato betsaka indrindra. Misaotra tamin'ny fanohanana rehetra!!
Ireo efatra hafa nandresy dia Goods for Good, iSurvive, Wokai, Yoga Bear.
Raha tsy fantatrao, ny Global Voices Advocacy dia tetikasan'ny Global Voices mba hanangana tambajotram-bilaogera sy mpikatroka antserasera miady amin'ny sivana manerantany. Sami ben Gharbia, bilaogera Toniziana sady mpiaro ny fahalalaham-pitenena no taleny.
Zemanta dia bilaogy vaovao mahafinaritra sady fampiharana media sosialy azonao trohana toy ny itatry ny Firefox. Mandeha ao amin'ny Gmail ihany koa izy!
Anisan'ireo zavatra mahafinaritra sasany nolazain'ny olona tamin'ny fanohanan'izy ireo ny Global Voices Advocacy ny …
Tao amin'ny Sacred Beginnings, nanoratra ny bilaogera iray mitondra ny anarana hoe Moonstar Silverwolf:
Manohana tanteraka ny zavatra ataon'izy ireo aho ary manantena fa hahita fahombiazana hatrany izy ireo amin'ny fampahatsiahivana ny habetsaky ny sivana sy ny mety hiparitahany haingana. Manohana ny fitaovan'izy ireo mikasika ny fomba fitarihana sy fanampiana ho an'ireo bilaogy tsy mitonona anarana ihany koa aho mba tsy hanakanana ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny tontolon'ny aterineto tahaka ny mety ho ao amin'ny tontolo tena izy. Firenena maro sy vondrona maro no hanohitra ny fahalalaham-pitenenana isaky ny afaka manao izany izy ireo, asantsika ny manampy ireo izay mila miteny ary manome azy ireo fahafahana hanao izany tsy misy tahotra.
Aparna Ray nanome ny vatony amin'ny maha-iray amin'i Newsmerick azy:
Androany, te-hiato kely aho
Ary hibilaogy ho an'ny zavatra tiako indrindra
Ny tetikasa “Advox”
Tena mamirapiratra tokoa izany!
Asa mendrika tehaka avy amin'ny fo!
Ao amin'ny bilaogy Media Re:Public, Persephone Miel nanoratra hoe:
Famoahana feno: Naman'ny ankamaroan'ny olona izay mahatonga ny Global Voices ho toy izao aho ary manoratra ity aho androany ho setrin'ny fanamby iray mahaliana izay mety hitondra vola bebe kokoa ho an'ny Global Voices. Saingy tsy manao izany aho mba hanampiana ireo namako, manao izany aho satria fantatro ny asa mafy ataon'izy ireo, ny hamaroan'ny tetikasa vaovao mahagaga tian'izy ireo hatao sy ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny tetikasa fananganana fifandraisana miampita sisintany fa tokony ho olom-pirenena manerantany isika rehetra.
Mamerina ny fisaorana eram-po ho an'ny rehetra noho ny fanohanana lehibe. Raha misy olona mahatsapa ho voatosika hanao fanomezana, dia ho ekenay am-pifaliana. Saingy ny finamananao no vola ahafahantsika mahomby tokoa. Ia!